UKUWELA IZILWANYANA KWEZONA LALI ZIDUMILEYO | ABONA BANTU BAKUMNANDI KWEZIQITHI - IRADIO TIMES - IMIDLALO
Ukuwela izilwanyana abahlali bendawo
Ukuwela kwezilwanyana: IiHorizons ezintsha zifuna intshayelelo encinci emva kokukhula kokulandela okukhulu ngexesha le-2020, ukubonelela ngee-gamers uhlobo lokubaleka ngexesha leeyure ezinde ekhaya ekutshixweni.
Injongo yomdlalo kukwakha iparadesi yakho kwisiqithi esiqinisekileyo apho uza kudibana nabalinganiswa abohlukeneyo banikezela ngezinto ezahlukeneyo.
Bangaphezu kwama-390 abantu besiqithi abanokudibana nabo ekugqibeleni, kwaye ukubanciphisa ngumsebenzi onzima.
Ke ukuba ufuna ukwazi ukuba ngabaphi abahlali besiqithi abafanelekileyo onokuchitha nabo, ezi ziinkcukacha ekufuneka uzazi.
Abona bantu beziqithi abahle kakhulu ukuba bakhethe ukuwela izilwanyana
Uya kuba nzima ukufumana umhlali kwi-Animal Crossing ethandwa kakhulu kunoRaymond. Uneheterochromia, oko kuthetha ukuba amehlo akhe anemibala eyahlukileyo, kwaye unxibe iimpahla ezipholileyo, ezinje ngeshishini. Uhlobo lobuntu bakhe nguSmug - kwaye awuhlali ufumana abemi besiqithi saseSmug kumdlalo.
URaymond ngumlingiswa ofunwa kakhulu kwaye ungangenisa imali ngokwenyani ukuba ukwisiqithi sakho; Abanye abadlali baya kukulungela ukwahlukana nemali ebalulekileyo yomdlalo ukuze bafumane ithuba lokufudukela kwelabo. Akumangalisi ke ukuba athandwe kangaka!
UDiana yinyamakazi kwaye, sicinga ukuba, wabizwa ngegama lesithixo samaRoma esinegama elifanayo (isithixokazi sezilwanyana zasendle kunye nokuzingela) uphawu lwayo yayiyinyamakazi.
Ngelixa enoluhlobo lobuntu bukaSnooty, akukho ndawo akuyo kufutshane njengothotho njengabanye abantu besiqithi oza kuthi uhlangane- enyanisweni unokuba ulungile!
Jonga indlela amnandi ngayo uZucker xa efunda incwadi! I-catchphrase yakhe ibhloko kwaye ngokuqinisekileyo ungomnye wabalinganiswa be-octopus abadumileyo kumdlalo.
Ukonqena ngokumangalisayo-olu luphawu esinokuluhlonipha.
UBob ngumlinganiswa welifa kwaye ke, uyintandokazi kwabaninzi. Ukholelwa ukuba ungumlingiswa wokuqala owenzelwe umdlalo kwaye ebeyinxalenye yomdlalo wonke kuthotho ukuza kuthi ga ngoku.
NjengoZucker, naye uneLazy ubuntu uhlobo, olwenza ukuba kube mnandi ukunxibelelana naye. Kwaye uyilo olu mfusa lubukeka lupholile! Awunakuhamba gwenxa ngoBob.
Ngamehlo angenanto nomlomo, ukubonakala kukaCoco kuyahluka kwabanye abalinganiswa, nangona kunjalo uninzi lukufumanisa kuyilo olunomdla.
Eyaziwayo ngenxa yobuntu bakhe obuqhelekileyo, uya kuhlala ufumana uCoco onobungane kwaye ongenekayo.
Okwangoku, kujongeka kukubi.
U-Audie akafani nabanye abalinganiswa abakolu luhlu njengoko wabizwa ngegama lomlandeli wezilwanyana ukuwela - inenekazi esele likhulile elinomlutha kakhulu kumdlalo, lavala iiyure ezingama-3 500 lidlala ingxelo entsha yeLeaf.
Ikhaya lika-Audie lihlala lihonjiswe kakuhle kwaye uyakufumanisa kunzima ukudibana nomlinganiswa onombono oqinisekileyo ngobomi.
Inkangeleko yamehlo esecaleni kwamehlo anikwa nguMarshal iyakhazimla kwaye, ngaphandle kweZucker, ulukhetho lwethu kumlinganiswa osikiweyo kumdlalo. Jonga loo ntambo yomtya incinci!
Ngelixa afanayo noRaymond, awuyi kufumana idola engako ngokurhweba ngaye kodwa uya kufumana ngaphezulu ngokwaneleyo - ukuba uyafuna nokuba aphume kwisiqithi sakho, oko kukuthi.
Umntu onesiqithi osisilumko kakhulu emva ko-Ankha, ongumxholo wamandulo wase-Egypt, unomnye woyilo oluphambili lomdlalo.
Ngaphakathi kwekhaya lakhe uya kufumana izinto ezintle ezimangalisayo nazo, uninzi lwazo lwenziwe ngegolide eqinileyo. (Ewe, oko kubandakanya nendlu yangasese yakhe!)
Enye ingwane apha kwaye kuphela ingwane yabasetyhini oya kuyifumana.
UMarina uyilo olupinki kwaye unqabile kakhulu-ewe, kukho abadlali ekudala bezama ukumfumana. Ukuba uphelela kwisiqithi sakho, zama ukumgcina apho!
Ngaba ufuna ukuba noyena mlingisi ubalaseleyo kuyo yonke i-Animal Crossing franchise kwisiqithi sakho? Ukuba kunjalo, khangela izilwanyana. Akaze abe nelizwi elibi lokuthetha ngaye nabani na.
Igadi enomdla, ayikho enye into ayithandayo ngaphandle kokuhambahamba esiqithini, unkcenkceshela iintyatyambo zakho. Akathandeki nje kuphela, uluncedo olukhulu naye!
Ngaba ufuna umxholo ongaphezulu wokuwela izilwanyana? Fumanisa undwendwela njani iiIphupha Iziqithi ekunqamleni kwezilwanyana okanye ufumanise kutheni ungatshintshi amagama esiqithi kwi-Animal Crossing .
Ndwendwela eyethu Ishedyuli yokukhululwa komdlalo wevidiyo yayo yonke imidlalo ezayo kwii-consoles. Jika ngeehabhu zethu ngaphezulu yokudlala kwaye iteknoloji iindaba. Okanye, ngaba ul Ufuna into oza kuyibukela? Jonga eyethu Isikhokelo seTV .
Umcimbi wepasika weRadio Times uphumile ngoku.
rainbow ezintandathu ukungqinga kwisizini ezayo
indawo yokuthenga itv
entsha kwi-tv ​​yokonwabisa ngoku
owavotelwa ngaphandle ngokungqongqo
ingwe ukumkani isigwebo
I-sunroom shades yenze ngokwakho